Ezona ziqholo zintle ngokwe Perfume Academy | Amadoda aQinisekileyo
Kwiintsuku ezidlulileyo, I-Perfume Academy ibibambe igala eMadrid ukuze ihambise amabhaso avuza iziqholo ezithandathu ezilungileyo zonyaka ngokwamacandelo abo. Ijaji eyenziwe ziingcali zobuhle kunye nosaziwayo abanjengoBoris Izaguirre, uSusanna Griso okanye uDario Barrio wayephethe ekukhetheni iziqholo eziphumeleleyo. 'UkuNcitshiswa kwabaNtsundu' kudidi lweeMpahla zabaThengi, i-'Agua Brava 'kwi-Classic Perfume, kunye ne-Allure Home kwicandelo lokukhetha, bakhethwa njengezona ziqholo zamadoda zibalaseleyo.
'UkuNcitshiswa kwabaNtsundu' nguAntonio Banderas wanikwa njengeyona 'Eyona Fume yokuThengisa yaBantu yaMadoda'. Ivumba lamva nje elixhaswe ngumdlali weqonga waseMalaga libandakanya amanqaku aphezulu afana ne-bergamot kunye ne-currant, kunye nentliziyo elawulwa ziziqholo, ezinje ngecardamom okanye i-nutmeg. Isiseko saso sibonisa ukuphefumlelwa kwaseMpuma kubonga i-amber, ukhuni lomsedare, i-tonka kunye ne-musk.
'U-Agua Brava' ngu-Puig ufumene kulo nyaka 'ibhaso elikhethekileyo leyona perfume ilungileyo yamadoda'. Iklasikhi yeKrisimesi, le eu de cologne ibalasele ngokuqabuka kwayo kwe-citrus, efumana umahluko kumanqaku afana nerosemary, bay leaf, pine okanye carnation.
Ibhaso 'leNgcono eQhelekileyo yokuKhetha amaDoda' liye ku 'Allure Homme Édition Blanche' nguChanel. Livumba elitsha, eliphefumlelweyo laseMpuma elivula ngamanqaku epepile emnyama kunye nepinki yaseMadagascar. Intliziyo yayo ilawulwa zizinto zesikhumba, ilemon yeSicilian, ibergamot kunye nesandwood kunye nokuvalwa kwayo kubandakanya amanqaku angaqhelekanga e-tonka yaseBrazil, iinkuni zerhasi, ijinja okanye ivanilla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Ezona ziqholo zilungileyo zihambelana nesiQholo sePerfume
Ibhegi kaFred Perry